Home Wararka Dacwada dilkii Ikram Tahliil oo la filayo inay salfato Xasan Kheyre
Dacwada dilkii Ikram Tahliil oo la filayo inay salfato Xasan Kheyre
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay dacwada dilka Allaha u naxariistee Ikraam Tahliil ayaa waxaa qayb weyn ku lahaan doono Xasan Cali Kheyre.
Xogta ayaa intaas ku daraysa in ay jiraan cadeeymo iyo xog ay Ikram Tahliil ka haysay qorshooyin dad lagu dhibaateeyay ee uu amarkeeda ay lahaayeen Kheyre iyo Fahad.
Mid kamida mas’uuliyiinta NISA ayaa u sheegay MOL in Xasan Kheyre uu qayb weyn ku leeyahay sababaha ka danbeeysay dilka Ikram Tahliil.
“ Aniga hadii aan ahaan lahaa Xasan Kheyre, caawa walwal ayaan ku jiifan lahaa… hadii xogtaan banaanka timaado Xasan kheyre gurigiisa ayaa shacabka ugu gali doonaan”. Ayuu yiri
Waxa uu intaas ku daray “ waa run Kheyre dilka gabadha qayb kama ahayn, laakiin sababta loo dilay gabadjaas ayuu lahaa”.